Varotra: miakatra ny fanjifana solika - ewa.mg
Varotra: miakatra ny fanjifana solika
News - Varotra: miakatra ny fanjifana solika
Miverina miakatra tsikelikely ny
fanjifana solika eto Madagasikara, nanomboka ny volana aogositra,
rehefa nohalefahana ny fihibohana, indrindra hatramin’ny
fisokafan’ny fitaterana. Mbola tsy misy antontanisa mazava avy
amin’ny OMH momba izay fiakaran’ny fanjifana izay fa samy
nanamarika izany kosa ny toby fivarotan-tsolika samihafa.
Eto an-dRenivohitra, toby iray
nanaovana fanadihadiana avy hatrany, nitombo 15 % ny fanjifana
gazoala, raha vao niverina ny fitateram-bahoaka ny fiandohan’ny
volana septambra, misy ambonin’izany any amin’ny toby lehibe
sasany. Manamarina izany ny kaoperativa mpitatitra maro, saingy
nanamarika koa izy ireo fa tsy afaka mihitsy ny fitohanan’ny
fifamoivoizana, mandany fotoana sy gazoala fotsiny, nefa
mbola ho ela vao tafarina.
Tsiahivina fa nihena 40 % ny
fanjifana solika, ny volana mey, vao mainka nihena 50 – 60
% ny volana jona sy jolay. Tsy nampidina ny vidin-tsolika
anefa izay fanjifana nihena izay. Raha ny fanazavan’ny
Praiminisitra Ntsay Christian, mbola misy volan’ireo kaompania
mpaninjara solika ireo amin’ny fanjakana, antony tsy mampidina azy.
Antsipiriany maro ny mamaritra ny vidin-tsolika : masonkarena tonga
eny amin’ny seranana (57%), fitaterana sy tahiry (8 %),
fitsinjarana (12 %), hetra sy haba (30%).
Salanisa amin’ny ankapobeny ireo fa
samy manana ny azy ny solika fandrehitra, ny lasantsy, ny gazoala.
Miainga avy amin’izay ny kajy rehetra sy ny tombom-barotra, manome
ny vidiny ho an’ny mpanjifa. Tamin’ny 20 jona 2019 ny
vidin-tsolika, amin’izao fotoana izao. 70 dolara ny baril iray
tamin’izany teny amin’ny tsena iraisam-pirenena, hatramin’ny
nisian’ny Covid-19, efa nisy fotoana tafidina 10 dolara,
ankehitriny manodidina ny 40 dolara.
L’article Varotra: miakatra ny fanjifana solika a été récupéré chez Newsmada.
Voina tampoka :: Zazakely, herintaona, namoy ny ainy latsaka tao anaty tatatra
Ranomaso sy hiakiaka ny an’ireo olona sy mpivarotra tany AmbohijafyToamasina omaly antoandro, tamin’ny loza nahazo ny zazalahikely iray, herintaona sy tapany. Namoy ny ainy latsaka tamin’ ny rano maloto tao anaty tatatra io zaza io, araka ny fizahana nataon’ny mpitandro ny filaminana tany an-toerana. Tsy nampandre ny polisy ny ray aman-drenin’ilay zaza nindaosin’ny fahafatesana, taorian’ny voina niseho tamin’ io antoandro io. Nanamarina ny vaovao sy nanao fanadihadiana no nahatongavan’ ny polisy teny an-toerana, saingy efa tsy tratra teny intsony ny ray aman-drenin’ ilay zaza maty. Nanontaniana momba ny zava-niseho ny olona teo amin’ny manodidina. Fantatra fa zanaka mpivarotra akondro teo Ambohijafy ilay namoy ny ainy.«Tsy nisy nahita ny nilatsahany tao anaty tatatra. Teo am-pivarotana teo akaiky teo ny ray aman-dreniny. Ilay zaza efa nitsingevana teo amin’ny rano maloto no nisy nahita. Tsy avotra intsony ny ainy», hoy ny mpitandro ny filaminana. Zaza tsy hita Ny polisy mpanao famotorana lalina no misahana an’ ity raharaha ity. Nambaran’ izy ireo fa tsy maintsy tadiavina sy halaina am-bavany ny ray aman-drenin’ilay zazakely. Hatao ny famotorana noho ny fisiana fahafatesana olona. Miankina amin’ny valin’ny fanadihadiana anefa ka tsy voatery hampiakarina eny amin’ny Fampanoavana ireo ray aman-dreniny ireo. Nisy voina nihatra tamina zaza tsy ampy taona tahaka ity tany Ambohijafy ity ihany koa tany Ankirihiry Toamasina, tapa-bolana lasa izay. Voalaza fa nisy zaza iray, folo taona, latsaka tao anaty lakandrano. Tsy mbola hita, hatramin’ny omaly, ilay zaza. Mitohy ny fikarohana azy. Ny polisy ihany koa no misahana ny fanadihadiana momba io tranga io. L’article Voina tampoka :: Zazakely, herintaona, namoy ny ainy latsaka tao anaty tatatra est apparu en premier sur AoRaha.
Mbola misy sahy mandika lalàna ihany: kamiao hihazo an’i Toliara, tratra nitondra olona 16 an-tsokosoko
Mitohy hatrany ny tsy fanarahan-dalàna ataon’ireo mpamily mivoaka ny Renivohitra. Kamiao iray indray no tratra nitondra olona antsokosoko teny Ambalavao, Antananarivo Atsimondrano, ny asabotsy alina teo.Tra-tehaky ny zandary tao Ambalavao Antanana­rivo Atsimondrano, ny alin’ny asabotsy teo tamin’ny 8 ora ny kamiao iray saika hihazo an’i Toliara nitondra olona 16 an-tsokosoko niainga avy ao amin’ny Fasan-karana. «…Tsirihina sy savaina avokoa ny fiara mihazo ireo lalam-pirenena… Niangavina ny mpamily hamoha ny labasy aoriana hanaovana fitsirihana. Tampoka teo anefa, nisy finday naneno avy ao amin’ny fitoeran’entana », hoy ny zandary, loharanom-baovao. Hita tamin’ny fizahana natao ireo olona mivangongo miafina voatakon’ireo kesika sy baoritra tao aorina. Nahitana lehilahy miisa enina, vehivavy efatra ary ankizy miisa enina ireo mpandeha an-tsokosoko ireo. Olona samy niakatra teo amin’ny fiantsonan’ny Fasan’ ny karana handeha hianatsimo avokoa. Nogiazana avy hatrany ny fiara, notanana harahi-maso kosa ny mpamily sy ny mpanampy azy. Notanana sy nanaovana famotorana koa ireo mpandeha. Nilaza ny zandary fa mamoafady tanteraka ny fitaterana olona an-tsokosoko. Izany, hoy izy ireo, no mahatonga ny fiparitahan’ny valanaretina manerana ny Nosy. Manoloana ny tranga toy izao, tsy handefitra ary mampitandrina fa tsy hisy ny fitserana na kely akory aza, hoy ny fanazavan’ny zandarimariam-pirenena.Henintsoa HaniL’article Mbola misy sahy mandika lalàna ihany: kamiao hihazo an’i Toliara, tratra nitondra olona 16 an-tsokosoko a été récupéré chez Newsmada.
Hizarana arotava avokoa ny mpiadina CEPE: manomboka anio ny fakana taratasy fiantsoana
Vonona ny mpisehatra ifotony ary tsy maintsy tontosa ny CEPE, ny 1 septambra ho avy izao. Efa nivaha ny olan’ny mpiasan’ny Cnapmad momba ny karama ka hanonta ny laza adina ireo mpiasa. Mahatratra 88 000 mahery ny isan’ny mpiadina amin’ny fanadinana CEPE ho an’ny fari-piadidiam-pampianarana Analamanga ao anatin’ny Cisco valo ka hiparitaka amin’ny foibem-panadinana 214, araka ny fanazavan’ny mpiandraikitra ny Dren, omaly. Hotanterahina ny 1 septambra izany ho an’ny eto Antananarivo sy any Antsiranana, araka ny toromariky ny filoha. “Samy nanolotra ny tetiandro mety aminy araka ny zava-misy any an-toerana ny Dren 22 nialoha ny namoahana ny tetiandro farany”, hoy ny minisitry ny Fanabeazana, Sahondrarimalala Marie Michelle tao anatin’ny fandaharana mivantana. Hotsinjaraina isaky ny Dren ny laza adina, amin’ity herinandro ity, satria mipetraka telo andro mialoha ny fanadinana hatrany ny laza adina. Tsy mitovy ny laza adina isam-paritra fa arakaraka ny fandaharam-pianarana tontosa ny famolavolana. Efa niravona koa ny olan’ny karama tsy voaloa ho an’ny mpiasan’ny Cnapamd ka manohy ny asa fanontana ny laza adina izy ireo, nanomboka omaly.Hosantarina anio ny fizarana ny taratasy fiantsoana ho an’ny mpiadina amin’ny CEPE ary hitohy hatramin’ny zoma ho avy izao izany. Misy ny lamina voaomana momba izay ka ny talen’ny sekoly no tonga maka izany eny anivon’ny foibem-panadinana samihafa.Tokony hanana taratasy fiantsoana avokoa ny mpiadina fa tsy azon’ny talen-tsekoly amin’ny sehatra tsy miankina ny mitazona azy ho fitsinjovana ny hoavin’ny mpiadina tsirairay.Vonona ny olona rehetra hisehatra amin’ny fanatanterahana ny CEPE ary hizarana arotava avokoa ny mpiadina sy ny mpiasa rehetra. Tsy maintsy handrarahana fanafody ny efitrano ampiasaina mandritra ny fanadinana ary hajaina ny fepetra ara-pahasalamana.29 143 ny mpiadina anatin’ny Cisco Antananarivo Renivohitra, hozaraina amin’ny foibem-panadinana 42 ahitana efitrano 683. Mahatratra 22 ny olona manana fahasembanana hiatrika ny fanadinana amin’ity taona ity, araka ny fanazavana azo. Vonjy A. L’article Hizarana arotava avokoa ny mpiadina CEPE: manomboka anio ny fakana taratasy fiantsoana a été récupéré chez Newsmada.
Kick Boxing –Tompondaka an’ Analamanga: ho hentitra amin’ny fitsarana ny mpitsara
Hotontosaina ny alahady 16 jiona ho avy izao ao amin’ny kianja mitafon’Ankorondrano ny fiadiana ny tompondaka an’Analamanga, eo amin’ny taranja kick boxing. Ny “Classe A” amin’ny sokajy rehetra no mandray anjara amin’ity fifaninanana ity, sokajy hahitana ireo mpikatroka efa manana traikefa ambony sy efa niatrika lalao iraisam-pirenena maro. Araka izany, ho sarotiny ny fitsarana, raha ny fanazavana nentin’ny solontenan’ny mpitsara, ny asabotsy lasa teo. Hifantenana izay hisolo tena an’Analamanga amin’ny fiadiana ny tompondaka nasionaly sy ireo lalao iraisam-pirenena handraisantsika anjara rahateo ity fifaninanana ity ka izay tena mendrika no hahazo ny fandresena. Nanamafy izany ny filohan’ny ligin’Analamanga izay nilaza fa saika efa nahazo fandresena teo amin’ny sehatra iraisam-pirenena avokoa ireo ao anatin’ity “classe A” ity ka ho hentitra ny fitsarana ny ady.Mahakasika ity fiadiana ny tompondaka an’Analamanga ity hatrany, seksiona miisa 5 no hanana solontena, hahitana an’Antananarivo Renivohitra, Avaradrano, Atsimondrano, Andrefan’Iarivo ary Atsinananana. Ity farany izay vao avy natsangana tsy ela ary efa handray anjara sahady amin’ity fihaonana ity. Tonga tetsy amin’ny Pietra Hotel Analakely ny solontenan’izy ireo nampahafantatra ity hetsika ity, niaraka tamin’ny ligin’Analamanga sy ireo mpanohana marobe, isan’izany ny Gastronomie Pizza sy ny Savonnerie Tropicale.Araka ny fandaharam-potoana, hezahina, hoy ny nambaran’ny filohan’ny ligin’Analamanga ny hanombohana ny fifaninanana amin’ny 8 ora maraina tsy diso, mba hahafahana mamita izany alohan’ny amin’ny 6 ora hariva. Ny fanaovana ny fiantsoana ireo mpikatroka sy ny fanamarinana ny fahazoan-dalana hilalao ary ny filatroana no hisantarana ny fotoana, mialohan’ny hidirana amin’ny ady. Mi.RazL’article Kick Boxing –Tompondaka an’ Analamanga: ho hentitra amin’ny fitsarana ny mpitsara a été récupéré chez Newsmada.
Mbola olana goavana ny famatsiana herinaratra any ambanivohitra. Mijery ny famahana izany akaiky ny avy amin’ny sehatra tsy miankina maro, mampisy ny famatsiana herinaratra ao amin’ny kaominina Sarobaratra, distrikan’i Miarinarivo, faritra Itasy. Tompon-kevitra tamin‘ny famolavolana ny tetikasa ny Patmad (1), tarihin’i Dama ao amin’ny tarika Mahaleo ; ny CEAS (2) ; ny Aider (3); ary ny orinasa WeLight Madagascar miandraikitra ny fitantanana ny famatsiana. Efa misy traikefa vitan’izy ireo momba izany famatsiana herinaratra izany, hita any Andevoranto (Atsinanana), Sandrakatsy (Analanjirofo), Betsiaka (Diana), Bemaneviky (Diana), ary izao vita any Sarobaratra izao, sy izay mbola hatao any amin’ny kaominina ambanivohitra hafa.Natomboka ny taona 2017 ny asa fanamboarana tohodrano mamokatra herinaratra ao Andriamamovoka, fokontany Fialofa, sy ny andrin-jiro, nataon’ny orinasa Sagemcom. Teknisianina malagasy avy amin’ny fikambanan’ny injeniera ho an’ny fampandrosoana ny angovo any ambanivohitra (Aider) nisahana ny asa manontolo hatramin’ny fametrahana milina (turbines). “Manana teknisianina ampy sy mahay ny Malagasy, betsaka ihany koa ny fikarohana vitan’ny tanora avy amin’ny Polytechniques, nefa tsy voatrandraka”, hoy i Dama. Koa izao porofoin’ny Patmad sy ny Aider izao izany fahaiza-manao izany.“Tokony hohararaotin’ny fitondram-panjakana ny fiaraha-miasa amina sehatra tsy miankina toy izao, raha misy tokoa ny finiavana hampitombo ny famatsiana angovo eto Madagasikara. Tsy azo antenaina hahavita izany raha ny Jirama”, hoy ny teknisianina iray. Matoky azy ireo tanteraka ny mpamatsy vola : COI, sampana angovo ; FGC (4) ; ary ny Repic (5) ; niampy ny vola nampiasan’ny WeLight Madagascar. Ireo rehetra ireo amin’ny ankapobeny 393.000 euros (1,572 miliara Ar) nahavitana io tetikasa io.Mahita sy mahatsapa ny fijalian’ny mponina any ambanivohitra izy ireo, izay tsy misy afa-tsy 5 % monja ny mahazo famatsiana herinaratra amin’izao taonjato izao. Ny rano anefa misy, miampy ny rivotra sy ny masoandro, tsara ho trandrahina hahazoana angovo azo avaozina. R.Mathieu Patmad (1) : Partenariat technique à MadagascarCEAS (2) : Centre écologique Albert Schweitzer SuisseAider (3) : Association des ingénieurs pour le développement des énergies renouvelablesFGC (4) : Fédération Genevoise de coopérationRepic (5): Renewable energy promotion in international cooperation L’article Kaominina Sarobaratra, Miarinarivo: nametrahan’ny sehatra tsy miankina famatsiana angovo a été récupéré chez Newsmada.
Mombassa, Kenya: amidy amin’ny tsena iraisam-pirenena ny dite Sahambavy
Sahambavy, kaominina ambanivohitra iray, 20 km atsinanan’i Fianarantsoa, hany tokana eto Madagasikara misy voly dite, hatramin’ny taona 1969. Amin’io toerana io ihany ny toe-tany sy ny toetr’andro mifandraika amin’ny voly dite eto amin’ny Nosy.10 na 15 % ny vokatra ihany ny ampy ho an’ny tsena eto an-toerana satria tsy mpisotro dite ny Malagasy. Ankoatra izay, miondrana any ivelany avokoa. Amin’ny Malagasy, ny hoe dite, ravimboafotsy na ranomafana laroina voasary sy sakamalaho. Tsy tena dite ny dite amin’ny Malagasy. Ny vokarina any Sahambavy no tena dite, tsara kalitao, afaka mifaninana tsara eo amin’ny tsena iraisam-pirenena.Ratsy lalana ny mankany Sahambavy nefa azo leferina ihany raha ampitahana amin’ny kaominina ambanivohitra maro. Velarana maitso misy ny voly dite: 90 ha eo ho eo ny voly tsotra ataon’ny tantsaha, 220 ha ny voly indostrialy. 400 t isan-taona ny vokatra dite any Sahambavy. Betsaka izany raha eto amintsika, saingy tsy ampy 10 % amin’ny vitan’ny hafa. Alefa any Mombassa, Kenya, miditra amin’ny tsenan’ny dite, ny avy any Sahambavy. Mifaninana amin’ny vokatry ny hafa ka izay mahasahy mividy lafo no mahazo ny vokatra. Mividy sy mivarotra dite eto an-toerana ny orinasa Taf.Manome hery… manala havizananaMpanao dite malaza eran-tany, ohatra, ny Lipton any Angletera. Voalohany ry zareo Anglisy, ny Indianina, ny Arabo amin’ny fisotroana dite. Io Lipton io, hatramin’ny 1870, mividy sy manodina ny vokatra asiana fangarony karazany maro. Misy dite atao hosotroina maraina, manome hery hoentina miasa; hafa ny amin’ny 10 ora, mitazona hery; karazany hafa ny amin’ny 2 ora tolakandro, mety tsy mampatory; mbola karazany hafa indray ny amin’ny 6 ora hariva, manala vizana. Mahafantatra izany tsara ry zareo mpisotro dite.Sahirana ny mpandraharaha mpanondrana dite eto amintsika. Talohan’ny 2009, dimy andro monja dia tonga any Mombassa ny vokatra. Mbola niasa ny seranan-tsambon’i Manakara tamin’izany. Ankehitriny, tsy maintsy ampiakarina any Toamasina ny vokatra, miandry sambo, miampita mankany Nosy Maorisy, mihodina mankany Afrika Atsimo… telo na dimy volana vao tonga any Mombassa, raha ny fanazavan’ny mpandraharaha iray. Amin’izao valanaretina izao, mihitsoka tanteraka tsy tafavoaka ny vokatra mitentina anjatony tapitrisa ariary, atahorana sao ho simba. R.MathieuL’article Mombassa, Kenya: amidy amin’ny tsena iraisam-pirenena ny dite Sahambavy a été récupéré chez Newsmada.
Fidy de l’Anôsy – Afro beat: “Manana ny hoaviny mamiratra i Karinah”
Karinah, mpanakanto andriambavilanitra nisafidy ny fivoizana ny « Afro beat ». Nomarihin’i Fidy de l’Anôsy, tompon’andraikitra voalohany eo anivon’ny tranom-pamokarana « Fido prod », mandray an-tanana ny famolavolana an’i Karinah eo amin’ny lafiny mozika fa “mpanakanto manana ny hoaviny mamiratra i Karinah. Manaporofo izany ny fankafizan’ireo liankanto sahady ireo vazony. Ampahany amin’ireny ny « Engagé » sy ny « Tompony Zah ». Ity farany izay efa tsy afaka am-bavan’ireo mpankafy, tsy eto Iarivo ihany fa hatrany amin’ny faritra manerana ny Nosy”. Raha ny fanazavany hatrany, fa tombony ho an’i Karinah ny fahafahany milalao ny feo ambany sy manakatra ny avo. Tsy mionona hatreo amin’ny famolahana ny « Afro beat » fa miezaka mivelatra amina gadona hafa toy ny « slow », “reggae », « sega ». Tsy mitsaha-mikaroka amin’ny fampiarahana ny gadon-kira malagasy sy vahiny hanjary mozika vaovao ihany koa.Tsetsatsetsa tsy aritra no ilazana fa tao anatin’ny fihibohana no namokaran’ny « Fido prod » ireo vazon’i Karinah sy nanatontosana ary nanapariahana ireo rindran-tsariny. Nampanantena ny hanajary hira sahaza ny fetin’ny faran’ny taona i Karinah ho fanomezana fahafaham-po ireo mpiondana mozika mihetsika sy mafana. Tsy ho diso ihany koa anefa ireo mankafy ny mozika milamina.Nanangona: HaRy Razafindrakoto L’article Fidy de l’Anôsy – Afro beat: “Manana ny hoaviny mamiratra i Karinah” a été récupéré chez Newsmada.
Tao anatin’ny roa andro: 46 ireo olona tsy nanao arotava
Tao anatin’ny roa andro, nahatratra 46 isa ireo olona tratra tsy nanao arotava. Isa voaangona nandritra ny hetsika ataon’ny Police urbaine eo anivon’ny commissariat central d’Antananarivo, ny talata sy alarobia teo. Voasazy avokoa ireo tsy manaja ny fepetra fiarovana ny fihanaky ny valanaretina ka nampanaovina ny “Travaux d’intérêt general” na TIG. Miisa 43 kosa ireo moto voasava ary fantatra fa tsy ara-dalàna ny taratasy momba azy. Ankoatra izay, mpanampy mpamily miisa valo ihany koa tratran’ny polisim-pirenena tsy nanao arotava “visière”. Henintsoa HaniL’article Tao anatin’ny roa andro: 46 ireo olona tsy nanao arotava a été récupéré chez Newsmada.
COSTM-EST: nahavita fifanaraham-piaraha-miasa
Nivoitra taorian’ny fifampiresahana nisy teo amin’ny Club Omnisport Tanambao Morafeno (COSTM) sy ny fikambanana Espoirs Sportifs de Tuléar (EST), natao ny alakamisy lasa teo, fa hiaraka hiasa ny roa tonta. Nikaon-doha ny filohan’ny klioba COSTM, Rafanomezana Lalo sy ny filohan’ny EST, i Vital Serge, samy nahatsapa fa ilaina ny fiaraha-miasa. Maro ny azo hifanampiana, raha ny fanazavana, isan’izany ny famatsiana ara-pitaovana ny COSTM omen’ny EST sy fahavononan’ity farany hanampy ny hoenti-manana ny klioba amin’ny fiatrehana fifaninanana nasionaly. Tanjona amin’izao fiaraha-miasa izao, raha ny nambaran’ny filohan’ny EST, voalohany ny hijerena izay fomba hahafahana manambatra ny klioba, faharoa, ny hanitarana ny klioba EST hivelatra amin’ny taranja hafa. Tsiahivina, efa nanomboka ny taona 1983 no niforona ny COSTM, izay misy taranja baolina kitra, ady totohondry, Handball, atletisma ary ny taona 2016 ny nanomboka nisy ny taranja Judo. Nohamafisin’ny roa tonta fa ho maro ny tetikasa hiaraha-manao, mikasa ny hanangana Dojo iraisana izy ireo, amin’ny taona 2021. Mi.Raz L’article COSTM-EST: nahavita fifanaraham-piaraha-miasa a été récupéré chez Newsmada.